Vaovao - Ahoana no ahazoana teny nalaina am-bava marina ho an'ny tetikasan'ny kitaponao?
Kitapo mangatsiaka kokoa
Maninona no KingHow
Sample & vidiny
Rafitra fanatsarana kalitao
Ahoana ny fomba hahazoana teny nalaina am-bidy marina ho an'ny tetikasan'ny kitaponao?
Vaovao momba ny orinasa
Mpanjifa maro izay mitady fonosana harona no manantena ny hanana teny nalaina haingana araka izay tratra ho an'ireo kitapom-batsy nomen'izy ireo. Na izany aza, noho ny antony maro samihafa dia sarotra ho an'ny mpanamboatra ny manome anao teny nalaina tena marina tsy misy antsipirian'ny santionany na kitapo. Raha ny marina dia misy fomba hahazoana citation marina kokoa, andao jerena!
Ny ozinin-kitapon-tanana amin'ny ankapobeny dia manisa ny vidiny mifototra amin'ny endrika, fitaovana ary ny haben'ny kitapo. Raha mandefa sary any amin'ny mpanamboatra fotsiny ny mpanjifa, ny mpanamboatra dia tsy mahazo antoka amin'ny antsipiriany manokana amin'ny fonosana ary tsy afaka manome teny nalaina marina.
Noho izany, raha te hanana teny nalaina marina ianao, ny fomba tsara indrindra dia ny mandefa ny fonosana santionany amin'ny mpanamboatra ary avelao ny mpanamboatra hanonona ny tena vidiny. Raha tsy manana santionany ara-batana ianao dia afaka manome sary famolavolana antsipirihany ho an'ny mpanamboatra ihany koa. Ny mpanamboatra dia afaka manao takelaka arakaraka ny volavolanao. Rehefa vita ny santionany dia hivoaka ny vidiny.
Ho fanampin'izany, tena ilaina koa ny miantsena manodidina, mba hahafahanao mahazo eritreritra sarotra momba ny vidin'ny harona ary tsy ho voafitaky ny mpanamboatra tsy ara-dalàna sasany minia mitory vidiny lafo.
Fotoana fandefasana: Sep-24-2020
368 ChengYi Ave. JiMei Xiamen China
+ 86-180 5002 4033
Ho an'ny fanontanina momba ny vokatra na pricelist anay, azafady mba avelao izahay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra.